IWCA Ku-Xirmooyinka - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
IWCA Ku-xirnaantu waa kooxo aasaasay xiriir rasmi ah IWCA; badankood waa ururo xarumo qoraal oo heer gobol ah oo u adeega goobo juqraafiyeed oo gaar ah. Kooxo daneynaya in ay ku midoobaan IWCA waxay arki karaan hababka hoos ku xusan waxayna la tashan karaan Madaxweynaha IWCA.
Xirfadlayaasha IWCA ee hadda jira
Afrika / Bariga Dhexe
Bariga Dhexe / Waqooyiga Afrika Xarumaha Qoraalka Isbahaysiga
Ururka Xarumaha Qoraalka Kanada / ururka Canadienne des xarumaha de rédaction
Ururka Xarunta Qoraalka Yurub
La Red Latino Americana de Centros iyo Barnaamijyada Escritura
Shirka Macallimiinta Qoraalka ee Colorado iyo Wyoming
GSOLE: Bulshada Caalamka ee Aqoonyahannada Wax Akhriska iyo Qoraalka ee Online-ka ah
SSWCA: Ururka Xarumaha Qorista Dugsiyada Sare
Noqoshada Shirkad IWCA (ka Shuruucda IWCA)
Shaqada ururada Xarumaha Qorista Qoradu waa inay siiso xirfadlayaal xarumo qoraal oo maxalli ah, gaar ahaan macallimiin, fursado ay kula kulmaan iskuna weydaarsadaan fikradaha, u soo bandhigaan waraaqaha, iyo inay ka qaybgalaan shirarka mihnadeed ee ka socda gobolladooda si kharashyada safarku aysan u noqon kuwo la mamnuuco.
Si sifiican loogu guuleysto yoolalkaan, xiriiriyeyaashu waa inay, uguyaraan, meelmariyaan shuruudaha soo socda sanadka ugu horeeya ee ku-xirnaanshahooda IWCA
Samee shirar joogto ah.
Bixinta waxay ku baaqeysaa soo-jeedinta shirka oo lagu dhawaaqa taariikhaha shirka ee daabacaadda IWCA.
Saraakiisha la doortay, oo ay ku jiraan wakiil ka socda guddiga IWCA. Sarkaalkaani ugu yaraan wuxuu ku shaqeyn doonaa liistada guddiga isla markaana wuxuu si caadi ah uga qeyb geli doonaa shirarka guddiga sida ay macquul tahay.
Qor dastuur ay u soo gudbiyaan IWCA.
Bixi IWCA warbixinnada ururrada xiriirka la leh markii la weydiiyo, oo ay ku jiraan liisaska xubinnimada, macluumaadka xiriirka xubnaha guddiga, taariikhaha shirarka, ku hadlayaasha khudbadaha ama fadhiyada, howlaha kale.
Hayso liistada xubinnimada firfircoon.
La xiriir xubnaha adoo adeegsanaya liistada qaybinta firfircoon, bogga internetka, liistada, ama joornaalka (ama iskudhafka macnayaashaas, isbeddela sida teknolojiyaddu u oggolaato).
Samee qorshe wada-baaris, la-talin, isku xirka, ama isku xirka oo ku marti qaada agaasimayaasha xarumaha qoraalka cusub iyo xirfadlayaasha bulshada kana caawiya inay helaan jawaabaha su'aalaha shaqadooda.
Taas bedelkeeda, xulafadu waxay ka heli doonaan dhiirigelin iyo caawinaad IWCA, oo ay kujirto lacag bixin sanadle ah si loogu wareejiyo kharashaadka khudbadaha khudbadaha ka hadlaya (hadda $ 250) iyo macluumaadka xiriirka xubnaha iman kara ee ku nool gobolkaas kana tirsan IWCA.
Haddii shirkad gacansaar ah aysan awoodin inay buuxiso shuruudaha ugu hooseeya ee kor ku xusan, madaxweynaha IWCA wuxuu baari doonaa duruufaha wuxuuna talo u soo jeedin doonaa guddiga. Guddigu wuxuu ku caddeyn karaa hay'adda ku xiran aqlabiyad saddex-meelood laba meel